မိုးမခကို ပေးတဲ့စာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 27
မိုးမခမိတ်ဆွေ (မြေလတ်)။ မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၂ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ညောင်ဦး၊ ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ရေနံချောင်း၊ မကွေး ခရီးစဉ်ကို မတ်လ ၂၇ မှာ မော်တော်ယာဉ်တန်းဖြင့် သွားမည်လို့ ပြောပါတယ်။ ညောင်ဦးကိုတော့ လေယာဉ်နဲ့ လာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မကွေးမှာ ဟောပြောစည်းရုံးခွင့်ရဖို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ခွင့်ပြုချက် မပေးဘူးလို့ ကြားနေရပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
၁၉၈၈ – ၂၀၁၁ န၀တနဲ့ နယက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်အတွင်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ၏ ပင်စင်နှင့် နိုင်ငံရေးဆုကြေးငွေ လေ့လာဖွယ် မိုးမခစာဖတ်သူတဦး၊ မတ် ၂၁၊ ၂၀၁၂ No tags for this post. Related posts No related posts.
ထားဝယ်မြို့နယ် ကျေးရွာသား သုံးထောင်က ရေကာတာစီမံကိန်းကို ကန့်ကွက်စာပို့ မိုးမခထံ ပေးတဲ့စာကဏ္ဍ ၊ မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၂ ထားဝယ်မြို့နယ်အနီး DELCO ကုမ္ပဏီက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော အညာဖျားရေကာတာစီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ ရွာသူရွာသား ၃၀၀၀ ခန့်မှ သူတို့၏ နစ်နာမှုများကို သမ္မတဆီ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးပို့လိုက်ပါတယ်။ သမ္မဆီ တင်လိုက်သောစာကို ပူးတွဲပါဖိုင်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကိစ္စရပ်အား အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ အညာဖျားရွာ – ဦးခင်ကြည် (အုပ်ချုပ်ရေးမှုး) ၊ ဦးမြင့်အောင် ( အညာဖျားကျေးရွာအုပ်စု ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှုး) ( တဆင့် – ၀၉-၄၉၈၅၁၉ ၊ ၀၉-၈၇၅၂၁၉၆) ဒါးသွေးကျောက်ရွာ – စောဒေးစံ ( အုပ်ချုပ်ရေးမှုး)၊...
ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ကန်းကျွန်းဈေးသည်များကန့်ကွက်စာပေးပို့ မိုးမခထံပေးတဲ့စာ၊ မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၂ ယမန်နေ့က လက်ခံရရှိတဲ့ စာဖတ်သူတွေပေးတဲ့စာမှာ ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ကန်းကျွန်းဈေးဆိုင်များ နေရာချထားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဈေးသူဈေးသားများရဲ့ အများမဲဆန္ဒ သဘောတူညီချက်တွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ရေးဆွဲတဲ့ ဈေးနေရာချထားမှုပုံစံ ကွဲပြားနေမှုကို အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေထံကို ဈေးသူ ဈေးသားများက တိုင်ကြားလိုက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ No tags for this post. Related posts No related posts.
အောင်ငြိမ်းချမ်း၊ ဝင်းနန္ဒာ/Myanmar Now ● ဘုန်းကြီးကျောင်း ငရဲခန်းမှာ လပေါင်းများစွာ https://t.co/TugPveIht3 https://t.co/tBsewScZmI about 39 minutes ago ReplyRetweetFavorite
မေငြိမ်း ● မိဘနဲ့ သားသမီးဆိုတာ https://t.co/EUR3M6iPBr https://t.co/CDoTPQsrvf about 59 minutes ago ReplyRetweetFavorite
ဒေါက်ထက် (ယူကေ) ● ဘိလပ်ကသူရဲ၊ မြန်မာပြည်ကသူရဲနှင့် ဘီရိုကြီး https://t.co/XxLiuz5EXc https://t.co/nxKjH2pvQF about3hours ago ReplyRetweetFavorite